နောင်ကျော် ● ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးနှင့် ကွေ့ကောက်မတ်စောက်သော လမ်းများ (၃) (နိဂုံး) | MoeMaKa Burmese News & Media
[၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ စာပေဗိမာန်ကပြုလုပ်မည့် “ခေတ်ပြိုင်သမိုင်းဆိုင်ရာ စာပေစာ တမ်းဖတ်ပွဲ” အတွက် စာတမ်းတောင်း၍ တင်သွင်းခဲ့သော်လည်း ပယ်ချခံရသည့်စာတမ်း ဖြစ်သည်။]
အပိုင်း (၁) နှင့် (၂) ပြန် ဖတ်ရန် —
”စစ်ရပ်စဲတဲ့နည်းလမ်းနှစ်နည်း၊ နှစ်မျိုးရှိတာကို ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ ပထမတနည်းကတော့ အပြုတ်တိုက်ရေး၊ တ နည်းအားဖြင့် တဘက်ကတဘက်ကို လက်နက်ချအရှုံးပေးစေတဲ့နည်းဖြစ်ပြီး နောက်တနည်းကတော့ တဘက်နဲ့တဘက် ဆွေးနွေးဖြေရှင်းပြီး ရပ်စဲတဲ့နည်းဆိုပြီး နှစ်နည်းရှိပါ တယ်။” ၁၃
”၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ကွန်မြူနစ်ပါတီ (ဗမာပြည်) ကို မတရားသင်းကြေညာ ၆၅၆၆၆ ပြည်တွင်းစစ် အစကာလကို ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၈) ရက်လို့ သတ်မှတ်ကြတဲ့အကြောင်း ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ အဲဒီမတိုင်ခင်ကာလမှာ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတွေ ရှိခဲ့ပါသလား။
”၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ကွန်မြူနစ်ပါတီ (ဗမာပြည်) ကို မတရားသင်းကြေညာခဲ့ရပြန်သည်။ သခင်စိုးသည် ၄င်း၏နောက်လိုက်များရှိရာဒေသများတွင် အကြမ်းဖက်နည်းများဖြင့် အစိုးရဆန့် ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ပြည်တွင်းစစ်ဆင်နွှဲရန်လည်းသခင်စိုးကလှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည်တွင်လည်း ကွန်မြူနစ်ပါတီ (ဗမာပြည်) ၏ လမ်းစဉ်ကို လက်ခံသော ဦးစိန္တာနှင့် ဘုံပေါက်သာကျော်တို့သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအစိုးရလက်ထက်မှစ၍ လက်နက်ကိုင်ပုန်ကန်ခဲ့ သည်။” ၁၄
”ရဲဘော်ဖြူများသည် ဖဆပလအစိုးရ၏လက်ဝဲညီညွှတ်ရေးလမ်းစဉ်ကို လက်မခံနိုင်ကြသဖြင့် ၁၉၄၈ခု နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်တွင်တောခိုကာ” ၁၅ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ခဲ့ကြတယ်။
”၁၉၄၈၊ သြဂုတ်လ (၈ မှ ၁၉ အထိ) ဗိုလ်စိန်တင်ခေါင်းဆောင်တဲ့ ဗမာ့သေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း (၁) တောခိုတယ်။ စစ်ဦးစီးဗိုလ် ဇေယျ၊ တပ်ရင်းမှူးဗိုလ်ရဲထွဋ်ဦးဆောင်တဲ့ မင်္ဂလာဒုံတပ်ရင်းမှရဲဘော်အချို့၊ ပဲခူးရှိ တပ်ရင်း (၆) မှ အရာရှိအကြပ်တပ်သားများပါရဲဘော်အချို့၊ စုစုပေါင်းအင်အား (၃၅၀) ခန့်ဟာ စစ်ကား (၃၂) စီးဖြင့် သြဂုတ် (၁၉) ရက်မှာ အစိုးရကိုဆန့်ကျင်တောခိုခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီတပ်မတော်မှ တောခိုတပ်တွေကို ”တော်လုန်သောဗမာ့တပ်မတော်” RBA လို့ခေါ်ကြတယ်” ၁၆
”၁၉၅၈ သြဂုတ်လ (၁၅) ရက်မှာ ပြည်သူ့ရဲဘော်ပါတီဟာ လက်နက်စွန့်ကြောင်း ကြေညာပြီးတရားဝင် ပါတီအဖြစ် ရပ်တည် သွားပါတယ်” ၁၇
၁၉၆၃ခုနှစ်မှာ တော်လှန်ရေးကောင်စီအစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေးကြတဲ့အကြောင်းကို ‘ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ၊ သမိုင်းဝင် စာရွက်စာတမ်းများ၊ အမှတ်-၁’ဆိုပြီး ထုတ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီထဲမှာ အလံနီကွန်မြူနစ်ပါတီ (ဗမာပြည်) နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းကို မှတ်တမ်းထဲမှာမတွေ့ရပါ။ အဲဒီအစားသုံးပါတီ (ကေအဲန်ယူပါတီ၊ မွန် ပြည်သစ်ပါတီ၊ ကရင်စီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ)က ၁၉၆၃၊ သြဂုတ် (၂၈) ရက်နေ့စွဲနဲ့ တော်လှန်ရေးကောင်စီ ကိုအကြောင်းပြန်ကြားချက်ထဲမှာ အလံနီပါတီနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီလိုရေးထားတာတွေ့ရတယ်။
”….. …..၂၀.၈.၆၃ နေ့ညမြန်မာ့အသံရေဒီယိုမှ တော်လှန်ရေးကောင်စီနှင့် အလံနီကွန်မြူနစ်ပါတီ (ဗမာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်း ရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး အပြီးအပိုင်ဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်းကြေညာသည်ကိုကြား သိရပါသည်။ ဤကြေညာ ချက်ကို ကြားသိရသည့်အတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို မုချပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ရမည်ဟု မျှော်လင့်ယုံကြည်လျက်ရှိကြကုန်သော ပြည်သူလူထုကြီးနှင့်တကွ ကျွန်တော်တို့သုံးပါတီအနေဖြင့် ၀မ်းနည်းခြင်းဖြစ်မိပါ သည်” ၁၈
”အလံနီကွန်မြူနစ်ပါတီ (ဗမာပြည်) နှင့်တော်လှန်ရေးကောင်စီတို့ ဆွေးနွေးပွဲပျက်ပြားသွားသည်နှင့် ပတ်သက်၍ ထိုသတင်း ကိုကြားရသည့်နေ့မှာ စိတ်အထိခိုက်ဆုံးနေ့ပါပဲဟု ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းက ယနေ့သတင်းထောက်များကို ထုတ် ဖော်ပြောကြားသည်။” ၁၉
၁၉၆၃ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ မဆလအစိုးရနဲ့ အလံနီကွန်မြူနစ်ပါတီတို့ကြားမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ လုပ်တယ်လို့မကြားရ တော့ပါ။ ”၁၉၇၀ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့တွင် သခင်စိုး၏ဇနီးဒေါ်ခင်စုနှင့်လသား အရွယ်သား ခင်မောင်စိုး (ခ)သီတာအေးတို့နှင့်အတူ အလင်းဝင်ခဲ့သည်။” ၂၀
ဖဆပလခေတ်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဖော်ပြချင်ပေမယ့် စာတမ်းရှည်မှာစိုးလို့ ချုံ့ပြီး တင်ပြပါ့မယ်။ အဲဒါကတော့ ၁၉၅၇၊ မေလ (၁) ရက်တုန်းက ဗန်းမော်တင်အောင်ရေးခဲ့တဲ့ ”ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တခုတည်းသောနည်းလမ်း”ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးထဲက ငြိမ်းချမ်းရေးမူ (၂) မူဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
”နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့က အလိုရှိနေသည်ဆိုသော ငြိမ်းချမ်းရေးတွင်
အဲဒီဆောင်းပါးမှာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့”သူမသာ၊ ကိုယ်မနာ သင်ပုန်းချေငြိမ်းချမ်းရေးမူ” ကို လူတိုင်းက ကြိုက်နှစ်သက်ထောက်ခံလာကြတဲ့အတွက် ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီခိုင်လိုမူမျိုး ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
တော်လှန်ရေးကောင်စီခေတ် ၁၉၆၃ မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲလုပ်တော့ အလံနီကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စား လှယ်တို့ သီးခြားဆွေးနွေးသလို ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့လည်း သီးခြာေးဆွးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ထူးခြားတယ်လို့ ပြောလို့ရတာ ကတော့ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော် လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ တပ်ပေါင်းစုလုပ်ထားတဲ့ “အ မျိုးသားဒီမိုကရေစီညီညွတ်ရေးတပ်ပေါင်းစု (မဒညတ)” မှာလည်းပါနေတာကြောင့် မဒညတအဖွဲ့ဝင်အနေနှင့်လည်း အစိုး ရနဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲသမိုင်းမှာ လူသိနည်းပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားတာလည်း ထင်ထင်ရှားရှားမရှိတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေ ရှိခဲ့ဖူး ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီ (၆) ရက်တုန်းက ကရင့်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) နဲ့ ဖဆပလအစိုးရတို့ရဲ့ ပထမအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ပွဲတွေကို အများသူငါ ပြည်သူလူထုတွေ မသိရတဲ့ အကြောင်းရင်း တွေထဲမှာ ကျွန်တော်တို့က အစိုးရရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေကပဲ တဆင့် သိခွင့်ရခဲ့ကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တခါတလေမှာ အခုလို ဝေးကွာလှမ်းတဲ့ နှစ်ကာလတွေက ကိစ္စတွေကို သိခွင့်မရ၊ မသိကြတာက သမိုင်းမှာ တာဝန်ရှိသူတွေက အဂတိတရားလေးပါးထဲက “ဘယာဂတိ” ကြောင့် အမှန်ရေးရမှာကိုကြောက်ပြီး သမိုင်းကို ထိန်ဝှက်ဖျောက်ဖျက်တာ၊ ဖုံးကွယ်တာ၊ အမှားကို အမှန်ဖြစ်အောင်ရေးခဲ့တာတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
“အင်းစိန်တိုက်ပွဲ (၁၁၁) ရက်အတွင်း တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံရေးပြဿနာတခု ဖြစ်လာတယ်။ ဖြစ်ရတဲ့အ ကြောင်းကတော့ ကရင်ကိုတိုက်ဖို့ ကွန်မြူနစ်တွေနဲ့စေ့စပ်ရာမှာ စေ့စပ်ပွဲပျက်သွားတော့ ကျွန်တော်တို့က ရင်ဘက်ကို လှည့်လာတယ်။ လှည်ပုံလှည့်နည်းက ကရင်တွေကို စည်းရုံးပေးဖို့ ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ အင်္ဂလိပ်သံအမတ်ကြီး Mr. Boker (မစ္စတာဘိုကာ)၊ အိန္ဒိယ သံအမတ်ကြီး Dr. Rauf (ဒေါက်တာရပ်ဖ်)၊ ပါကစ္စတန်သံအမတ်ကြီး Mr.M.D. Ali (မစ္စတာအာလီ) တို့အပြင် ခရစ်ယာန်အင်္ဂလီကန် ဂိုဏ်းချုကြီး Bishop West (ဘိရှော့ဝက်စ်)၊ ဆာစံစီဖိုးသမီး မစ္စဘမောင်ချိန်တို့ကို ချဉ်း ကပ်ပြီး ကျွန်တော်တို့နဲ့ လာကမ်းလှမ်းတယ်။ ဥက္ကဋ္ဌစောဘဦးကြီးဆီ ဦးနုက စာရးတယ်။ စာပါအကြောင်းအရာကတော့ “ခင်ဗျားတို့နဲ့ ကျွန်တော်တို့ တိုက်နေကြတာမကောင်းဘူး။ တိုင်းပြည်လည်း မီးလောင်ကုန်ပြီ။ ကရင်ကော ဗမာလူထုပါ သေ ကြေကြတဲ့အတွက် ပြဿနာကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်။ ဖြေရှင်းမယ်” ဆိုပြီးတော့ ကမ်းလှမ်းတယ်။ ဥက္ကဋ္ဌ စောဘဦးကြီးက ဒါကိုလက်ခံပြီး ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၆) ရက်မှာ သွားတွေ့တယ်။ …… တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာမှာ ဖဆပ လအစိုးရဘက်က ကျင်လည်စွာ နည်းပရိယာယ်များ ကျင့်သုံးနိုင်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ဗြိတိသျှ၊ အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်၊ ဘိရှော့ဝက်စ်၊ ဆာစံစီဖိုးသမီး မစ္စကလာရာဘဲင် ဘမောင်ချိန်တို့ရဲ့ ဆွဲဆောင်ဖိအားပေးမှုကြောင့်လည်းကောင်း၊ တွေ့ဆုံစေ့ စပ်ရေးမှာ လက်နက်ချရေးသို့ ရောက်သွားတယ်။ KNU ဥက္ကဋ္ဌကြီးစောဘဦးကြီးက ဖဆပလဘက်မှ တင်ပြလာတဲ့ လက် နက်ချရေးအစီအစဉ်ကို သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တယ်။”၂၂
“ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးအနေဖြင့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၁) ရက်နေ့ ကရင်တမျိုးသား လုံးဆိုင်ရာ ဆန္ဒပြ ပွဲကြီးတွင် “ပြည်တွင်းစစ်အလိုမရှိ”ဟူသော ကြွေးကြော်သံကိုကိုင်စွဲ၍ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားမှုကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး ပြဿနာများအား နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းပေးရန် တောင်းဆိုကြောင်း အတိအလင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖော်ပြခဲ့ရုံမက ၁၉၄၉ ခုနှစ် ကရင်အမျိုးသား တော်လှန်ရေးဖြစ်ပွားလာသည့်အချိန်မှစ၍ ၁၉၄၉ တွင် တကြိမ်၊ စုစုပေါင်း (၄)ကြိမ်မျှ အာဏာ လက် ကိုင်ထားသူအဆက်ဆက်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။ သို့ရာတွင် တွေ့ဆုံဆွေေးနွးပါသည် နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို လွတ်လပ်မျှတစွာ ဆွေးနွေးဖြေရှင်းနိုင်သည့်အဆင့်သို့မရောက်မီ အပစ်အခတ်ရပ်ဆိုင်း ထားရေး ဆွေးနွေးသည့်အဆင့်မှာပင် အာဏာလက်ပိုင်ထားသူအဆက်ဆက်က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ကို တဖက်သတ်ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းများမှာ အလွန်တရာမျှပင် ၀မ်းနည်းဖွယ်ကောင်းလှပေသည်။”၂၃
“ငြိမ်းချမ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်တိုင်း အကြမ်းဖက်နည်းဖြင့် အာဏာရယူထားသော ဗမာစစ်အုပ်စုတွေကသာ တဖက်သတ်ကျခဲ့တာသာဖြစ်သည်။ ………..သာဓကပြရမည်ဆိုလျှင် ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီနှင့် သုံးပါတီဆွေးနွေးပွဲ (မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၊ ကေအဲန်ယပါတီ၊ ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ) တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေးရှု၍ ဤသုံးပါတီသည် တော်လှန်ရေဂး ကောင်စီစစ်အုပ်စုနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ဤဆွေးနွေးပွဲသည် စစ်အုပ်စုမှ တဖက်သတ်မှု ကြောင့် အောင်မြင်မှုမရှိခဲ့ပါ….။
နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် ဗမာပြည်သူလူထုကြီးတရပ်လုံးအား ကိုယ်စားပြုမှုမရှိသော ဗမာစစ်အုပ်စုသည် ဖြစ်သင့်တာ ထက် မိမိတို့ဖြစ်ချင်သည့်ဘက်ကိုသာ လက်နက်အားကိုးပြီး လုပ်ခဲ့သည်။”၂၄
“(၃) မဒညတအနေဖြင့် ယခုအခြေအနေတွင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဘက်စလုံး ဆက်လက်ကြိုးပမ်း လျှင် ဖြစ်မြောက်ရရှိနိုင်သော အခြေအနေများရှိသေးသည်ဟူ၍ စွဲမြဲစွာ ယုံကြည်လျက်ပင်ရှိပါသည်။ ယခုအခါ ငြိမ်းချမ်းရေး အလင်းရောင် ထွက်ပြူခါစဖြစ်ပြီးမှ ပြည်တွင်းစစ်မီးအိနမ်သလ္လာများနှင့် ထပ်မံ၍ ပိတ်ဖုံးမသွားစေချင်ပါ။
မဒညတအဖွဲ့အနေဖြင့် ဤသဘောထားအတိုင်း တပြည်လုံး အာသာငမ်းငမ်း တောင့်တနေသော ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရေးအတွက် ဆက်လက်ကြိုးပမ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ပြည်သူလူထု ကြီးအား တင်ပြအပ်ပါသည်။”၂၅
“တော်လှန်ရေးကောင်စီ၏ ကမ်းလှမ်းဖိတ်ခေါ်ချက်အရ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတိနှင့် ကေအဲန်ယူပါတီ၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၊ ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီတို့ ပါဝင်သည့် (၃) ပါတီတို့သည် တော်လှန်ရေးကောင်စီနှင့် လာရောက်ဆွေးနွေးကြ ပါသည်။ ဤပါတီအဖွဲ့အစည်း များသည် တော်လှန်ရေးကောင်စီနှင့် ဆွေးနွေးနေစဉ်ချင်းဦးစီးအဖွဲ့ကိုပါ ထည့်သွင်း၍ အမျိုး သားဒီမိုကရေစီ ညီညွတ်ရေးတပ်ပေါင်းစု (မဒညတ) ဗဟိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အနေဖြင့် တော်လှန်ရေးကောင်စီနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ပြဿနာကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ …. ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရသည့်အကြောင်း ရင်းမှာ မဒညတအနေနှင့် စစ်ပြိုင် အစိုးရဖော်ထုတ်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေမှုနှင့် ထိုအားထုတ်မှုကို ဆက်လက်ခွင့်ပြုနေပါက တိုင်းပြည်နှစ်ခြမ်းကွဲသည်အထိ ကြီးမားသောအန္တရာယ်ကျရောက်မည်ကို တော် လှန်ရေးကောင် စီက မြင်တွေ့လာသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။”၂၆
တိုင်းပြည်ချောက်ထဲကျတော့မယ်ဆိုတာမျိုး၊ တိုင်းပြည်နှစ်ချြမ်းကွဲတော့မယ့် အန္တရာယ်ဆို တာမျိုးတွေဟာ စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်ရဲ့ သုံးနေကျလက်သုံးစကားတွေထဲမှာ ပါလေ့ရှိပါတယ်။ မဒညတဘက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့တာနဲ့ သဘောထားနဲ့ ကွဲလွဲမှုရှိနေတာကို သတိထားမိကြလိမ့်မယ် ထင် ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက “ကချင်လွတ်လပ်ရေးကောင်စီနဲ့ တော်လှန်ရေးကောင်စီအစိုးရတို့လည်း ဆွေး နွေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ၁၉၆၃၊ စက်တင်ဘာလ (၇) ရက်မှာ စတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြညပီး နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်၊ ရန်ကုန်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကို သဘောတူညီချက်မရလို့ အပြီးသတ်ရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ အစိုးရက ကြေညာပါတယ်။ ရဲနီကျော်ဇံရွှီးခေါင်းဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ ၁၉၆၃ ခု၊ ဇူလိုင် (၁၈) ရက်မှာ စတင်ဆွေး နွေးခဲ့တာမှာ သဘောတူညီချက်မရလို့ နိုဝင်ဘာ (၁၈) ရက်က ငပလီစခန်းမှာ လုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကို အပြီးသတ်ရပ် ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ အစိုးရက ကြေညာပါတယ်။”၂၇
“စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးကို တဖက်သတ်ဖျက်ဆီးသူတွေဖြစ်တယ်။ ဗမာပြည်မှာ ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်နေတာကို ဆက်လက်ရှည်ကြာအောင် လုပ်နေသူတွေဖြစ်တယ်။”၂၈
“၂။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းကို မှန်မှန်ကနက်န် ရှုမြင်သုံးသပ်မှုပြု ပြီးမှသာ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် နည်းလမ်းများ ရှာဇွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးမဲ့ရခြင်းအကြောင်းရင်းများထဲတွင် အဓိကပြဿနာ နှစ်ခု ပါဝင်နေပေသည်။ ၄င်းတို့မှာ –
၃။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် –
(ဂ) ပြဿနာ၌ ပါဝင်ပတ်သက်နေသူများ အချင်းချင်းအကြား အပြန်အလှန်လေးစားရေး နှင့် တန်းတူအသိအမှတ်ပြုရေးဟူသော မူများကို အခြေခံရပေမည်။”၂၉
“၃။ အစိုးရ တဘက်၊ ပြည်သူလူထုကြီးက တဘက်ဖြစ်နေသော ပဋိပက္ခသည် ဗမာ ပြည်ရှိ ပဋိပက္ခပေါင်းစုံများစွာအနက်က အဓိကပဋိပက္ခဖြစ်ပြီး ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီသည် ပြည်သူလူထုဘက် မှ ထာဝရရပ်တည်ွားမည်။ အဘက်ဘက်မှ ဆုတ်ယုတ်ပျက်ပြားနေသော မျက်မှောက်ဗမာပြည် ပြောင်းလဲတိုး တက်စေရန်အတွက်ဆိုလျှင် –
(ဂ) အမျိုးသားအားလုံး တန်းတူသွေးစည်းညီညွတ်ရမည်ဟု ယူဆပါသည်”၃၀
“၂၀၁၂။ ဖေဖော်ဝါရီတွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းစုံတို့၏ အစည်းအဝေးတရပ်ကို ပြန် လည်ခေါ်ယူကျင်းပပြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးစီမံချက် (Ethnic Peace Plan) တရပ် ကို ရေးသားပြုစုခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၂ စက်တင်ဘာလတွင် တိုင်းရင်းသားညီလာခံတရပ်ကို ထိုစဉ်က တရားဝင် တည်ရှိခဲ့ကြသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ တပ်ပေါင်းစုကြီး (၄)ခုမှ ပူးတွဲဦးဆောင်၍ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထိုတပ်ပေါင်းစုများမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု (NDF)၊ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေ စီအဖွဲ့ချုပ်-လွတ်မြောက်နယ်မြေ (UNLDLA)၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကောင်စီ (ENC) နှင့် ညီညွတ်သော တိုင်း ရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) တို့ဖြစ်ပါသည်။ ထိုညီလာခံတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို ရှေ့ ဆက် ဆောင်ရွက်ရန် UNFC ကို တာဝန်ပေးအပ်ပြီး WGEC ခေါ် Working Group For Ethnic Coordination (တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအလုပ်အဖွဲ့) ကိုလည်း ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။”၃၁
“၂၀၁၄၊ သြဂုတ်လ ဆွေးနွေးပွဲအောင်မြင်မှုကြောင့် စက်တင်ဘာလဆွေးနွေးပွဲတွင် စာချုပ်မူကြမ်း တခုလုံးကို သဘောတူညီနိုင်ကြလိမ့်မည်ဟု အားလုံးက မျှော်လင့်စောင့်စားခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် မမျှော်လင့် ဘဲ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းကိစ္စကြောင့် ဆွေးနွေးပွဲတခုလုံး ပျက်သွားတော့မလို ဖြစ်ခဲ့ရ သည်။”၃၂
“ဟိုယခင်အစိုးရအဆက်ဆက်က ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် မလုပ်နိုင်ခဲ့သော၊ မလုပ်ချင်ခဲ့သော အမွေဆိုးကို ယခုအစိုးရက ချေဖျက်ပြီး စစ်မှန်ခိုင်မာ၊ အာမခံချက်ရှိသော ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်ပြ နိုင်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမိုင်းတွင် စံပြအစိုးရဖြစ်မည်။ လက်ခမောင်းခတ်၍ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားနိုင်သော အစိုးရ ဖြစ်မည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် လုပ်နိုင်သောအစိုးရဟူသည်မှာ ပြည်တွင်းစစ် ၆၅နှစ်တာကာလမှာ ပေါ်မလာ ခဲ့ဖူးသေးပါ။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအစိုးရသည် ဤဂုဏ်သိက္ခာကို ရအောင် ယူသင့်ပါသည်။ ဒါမှလည်း နတ်လူသာဓု ခေါ်မည့်အစိုးရ ဖြစ်လိမ့်မည်။”၃၃
ဒီဆောင်းပါးနာမည်က “ငြိမ်းချမ်းရေးချိုးငှက်က အစိုးရလက်ထဲမှာ” ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအစိုး ရလက်ထက်မှာ “တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ိခုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်” ကို လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အဖွဲ့တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီး အတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဖွဲ့အားလုံး ပါဝင်လက်မှတ်ထိုးနိုင် တဲ့အထိ မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါကတော့ အားလုံးပါဝင်ရေးမူကို သဘောမတူခဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
“တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲများကို ခြုံငုံ၍ သုံးသပ်ပါက မိမိတို့ရင်ဆိုင်ရသော အခက်အခဲဆုံး ပြဿနာသည် ယုံကြည်မှု (Trust) ထက် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖန်တီးယူရမည်ဟူသော သန္နိဋ္ဌာန်ချခြင်း (Commitment)က ပို၍အရေးကြီးသည်ဟု ထင်ခဲ့ပါသည်။… ခိုင်မာသော သန္နိဋ္ဌာန်သာရှိပါက မယုံကြည်ရာက ယုံကြည်ရာသို့ ပြောင်းနိုင်မည်ဟု မြင်ခဲ့သည် ။ သို့ရာတွင် တကယ်လက်တွေ့ဆွေးနွေးပွဲစားပွဲခုံပေါ်သို့ ရောက်ကြသောအခါ ယုံကြည်မှု မရှိသောကြောင့် အကြိမ်ကြိမ်သော ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ရှေ့မတိုးဘဲ နောက်ကြောင်း ပြန်လှည့်သည်များကို ကြုံရပါသည်။”၃၄
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ အခန်း (၁)၊ ပုဒ်မ ၆(စ)မှာ –
“နိုင်ငံတော်အမျိုးသားနိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍတွင် တပ်မတော်က ပါဝင်ထမ်းဆောင် နုင်ရေး”၃၅
ဆိုပြီး ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ထားတယ်။ အခန်း ၅၊ ပုဒ်မ ၂၃၂ (ခ)၊ အပိုဒ် (၂)မှာ –
“ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနများ အတွက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထံမှ သင့်လျော်သည့် တပ်မတော်သားများ၏ အမည်စာရင်းကို ရယူရ မည်။”၃၆
ဒီနေရာမှာ အကြောင်းတိုက်ဆိုက်လာလို့ ၂၀၁၆၊ အောက်တိုဘာလထုတ် “ယနေ့ခေတ်” မဂ္ဂဇင်းမှာ ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးထဲက သဘောထားတခုကို ထုတ်နုတ်ပြပါရစေ။
”ဘက် (၃)ဘက်ရှိနေတဲ့ နေရာမှာ အဓိကအဆုံးအဖြတ်ကို ပေးမယ့်သူဟာလည်း စစ်တပ် (တပ်မတော်) ပဲ ဖြစ်နေတာလည်း ထူးခြားတဲ့အခြေအနေလို့ ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။ သူပုန်နဲ့ အစိုးရက ငြိမ်းချမ်းရေးကို (သေလောက်အောင်) ရချင်ယူချင်နေစေဦးတော့၊ စစ်တပ်က “ဟင့်အင်း” ဆိုပြီး ငြင်းသံလေး ထွက်လာရင် “ဘိုးဘိုးအောင်” လည်း ၀င်ကယ်လို့မရပါဘူး။ အစိုးရကို ဘာတော့ မလုပ်နဲ့၊ ဒါပဲလုပ်ပါလို့ စစ်တပ်ကပြောရင်လည်း “စစ်တပ်က အစိုးရရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလုပ်ရမယ်၊ သြဇာမပေးနဲ့” လို့ ပြောရဲတဲ့၊ ပြောလို့ရတဲ့ အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူး။ လက်ရှိမောင်းနှင်နေတဲ့ ယန္တရားကြီးဟာ ၂၀၀၈ ခေခြဥက လက်ညှိုးထိုး ထားတဲ့အတိုင်း လည်ပတ်နေရတာ၊ အဲဒီယန္တရားကြီးရဲ့ ခလုတ်ကို ကိုင်ထားတာက စစ်တပ်ပဲ မဟုတ်လား။”၃၇
၁၀။ ဥာဏ်မောင်ချစ် အို…ရွှေချိုးဖြူငဲ့”ကူ” ပါလှည့်၊ ပိတောက်ပွင့်သစ်မဂ္ဂဇင်း၊ ၂၀၁၁၊ နိုဝင်ဘာလထုတ်။
၁၆။ ၀င်းတင့်ထွန်း၊ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနေ့စွဲစဉ်သမိုင်း (အကျဉ်းချုပ်)၊ စာ – ၅၉။
၁၇။ ၀င်းတင့်ထွန်း၊ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနေ့စွဲစဉ်သမိုင်း (အကျဉ်းချုပ်)၊ စာ – ၈၀။
၂၀။ ဆရာကြီးသခင်စိုး (ဆောင်းပါးစုစည်းစာအုပ်)၊ စာ – ၁၀၄။
၂၁။ အောင်စောဦး၊ လွတ်လပ်ရေးရွှေရတု၊ ပြည်တွင်းစစ်နှစ်ငါးဆယ်၊ စာ – ၄၁၊ ၄၂။
၂၂။ အောင်စောဦး၊ လွတ်လပ်ရေးရွှေရတု၊ ပြည်တွင်းစစ်နှစ်ငါးဆယ်၊ စာ – ၂။
၂၆။ အောင်စောဦး လွတ်လပ်ရေးရွှေရတု ….. ၊ စာ – ၃၃၂။
၂၇။ အောင်စောဦး လွတ်လပ်ရေးရွှေရတု ….. ၊ စာ – ၃၃၆။
၂၈။ အောင်စောဦး လွတ်လပ်ရေးရွှေရတု ….. ၊ စာ – ၃၄၈။
၂၉။ အောင်စောဦး လွတ်လပ်ရေးရွှေရတု ….. ၊ စာ – ၄၂၇။
၃၀။ အောင်စောဦး လွတ်လပ်ရေးရွှေရတု ….. ၊ စာ – ၄၃၂။
၃၁။ ဆလိုင်းလျန်မှုန်း (ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှု (အတွဲ-၁) အမှာစာ – III
၃၂။ ဆလိုင်းလျန်မှုန်း (ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှု (အတွဲ-၁) အမှာစာ – VI
၃၃။ နောင်ကျော်၊ ချိုးကူသံလေးကို မလွမ်းဘူးလားအမေ၊ စာ – ၆၇။
၃၄။ ဆလိုင်းလျန်မှုန်း (ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှု (အတွဲ-၁)၊ အမှာစာ – VI
၃၅။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ စာ – ၃။
၃၆။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ စာ – ၈၆။